Antony 3 hampiantranoako ny Webinariko amin'ny ReadyTalk | Martech Zone
Antony 3 hampiantranoako ny Webinariko amin'ny ReadyTalk
Alakamisy, May 3, 2012 Talata, Jona 4, 2013 Isaac Pellerin
Nampahafantarina ahy voalohany ReadyTalk aorian'ny fananana fanalefahana tranonkala web miaraka amin'i GoToWebinar. Nanana vahiny 3 aho tamin'ny seho avy any Denver, San Francisco, ary London. Maherin'ny 200 ny mpanatrika marary sy tsara fanahy niantona tao rehefa niatrika fanemorana feo sy sary be dia be izahay. Ka mila mitady mpamatsy manana fotodrafitrasa mety hanohanana ny filan'ny mpanatrika sy ny mpanatrika. Eto no tsara indrindra ReadyTalk.
Experience misy: Ny ReadyTalk Webinar dia manana tsipika natokana ho an'ireo mpanolotra izay alefa amin'ny laharan'ny mpanatrika. Io dia ahafahan'izy ireo mifampikambana tsy misy fahatarana ela noho ny tsipika feno olona. Ireo slides dia azo alefa ao amin'ny mpizara ReadyTalk mba hahafahan'ny mpanolotra rehetra mandroso ilay slide.
Fanampiana an'ny mpandraharaha: Raha hanana mpanatrika marobe ianao, ReadyTalk dia afaka manome fanampiana ny mpandraharaha. Ity mpandraharaha ity dia mamaly ny fangatahana fanampiana ara-teknika avy amin'ny mpihaino. Izany dia manampy amin'ny fanomezana izay ilain'ny mpijery eo noho eo nefa tsy manelingelina ny fizotran'ny resaka amin'ireo mpanolotra.
Fandraisana an-tsoratra sy fanovana mora: ReadyTalk dia manome anao fidirana amin'ny fandraisam-peo avy hatrany aorian'ny hetsika ary manana tonian-dahatsoratra namboarina ahafahanao manapaka haingana ny webinaranao ary mampiditra ao amin'ny tranonkalanao. ReadyTalk dia mampiasa format mahazatra hanoratana ny webinar anao. Midika izany fa tsy handany ora maro hanovana endrika horonantsary fananana ho lasa zavatra azonao ampiasaina ianao (Raha toa ianao ka teo amin'ny faran'ny fanovana ny webinar iray dia fantatrao hoe ohatrinona ny fotoana itahirizan'ity)
Raha ny lafiny marketing dia ny ReadyTalk rafitra sy API somary matanjaka ary vonona ny hampidirina ihany koa. In automation marketing, ny fanaovana scoring hetsika toy ny webinar dia manakiana satria ny fihetsika toy izany dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny hoe mety ho lasa mpanjifa ny mpitsidika iray.
Ny marika ataonay dia misy akony amin'ny traikefa omenay ny vinaninay sy ny mpanjifanay. Zava-dehibe ny fananana fahatokiana amin'ny haitao ampiasaintsika handefasana ny atiny mahasarika izay iasantsika mafy hamoronana. Oh… ary raha tsy ampy izany, mifangaro miaraka amin'ny sehatra ReadyTalk Salesforce:
Ary koa miaraka amin'ny Eloqua:
Tags: eloquagotowebinarMarketing Webinarreadytalkreadytalk apisalesforce
Isaac Pellerin no Revenue Marketer ao amin'ny TinderBox, lozisialy ho serivisy iray izay manamora ny famoronana, fitantanana ary ny fanarahana tolo-kevitra ifanakalozana. Tiany ny tantara tsara ary ankafiziny ny miasa manatsara ny fomba fifandraisan'ny orinasa amin'ny hetahetany sy ny mpanjifany. Mino izy fa ny marketing sy ny varotra no mahomby indrindra rehefa nizara tanjona sy refy.
Ahoana ny fampiasan'ny orinasa madinidinika ny media sosialy
Statdash: Manamboara ny Dashboard Farany